Dood ku saabsan caqabadaha iyo fursadaha ka jira nidaamka caafimaadka oo lagu qabtay Muqdisho. - Jowhar somali news leader
June 22 (Jowhar.com)- Machadka horumarinta daraasaadka ee Somali institute of developmental studies (SIDS) ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay dood cilmiyeed ay kasoo qayb galeen qaar kamid ah dhakhaatiirta dalka iyo maamulada cisbitaalada caasimadda.
Doodda oo ku saabsanayd caqabadaha iyo fursadaha ka jira nidaamka caafimaadka ee dalka ayaa waxaa martidii kasoo qaybgashay ka mid ahaa Xildhibaan ahna Doctor Cali Xaaji Adam oo kamid ah golaha shacabka Ee barlamaanka federaalka Somaaliya, Dr. Cabdulaahi Maxamed Nuur agaasimaha cisbitaalka Somacare & Dr. Fartuun Shariif Maxamed oo ah agaasimaha cisbitaalka Banadir .
Qodobada kulanka aadka looga dooday waxaa kamid ah heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray nidaamka caafimaadka dalka sodonkii sano ee lasoo dhaafay oo ay arimaha caafimaadka inta badan gacanta ku hayeen dadka shacabku, Iyada oo si qoto dheer la isu dul istaagay dhinacyada uu nidaamka caafimaadka dalku horumarka & hoosudhaca ka sameeyay tobankii sano ee u dambaysay mudadaas.
Sidoo kale waxaa ka mid ahaa qodobadii kale ee laga wada hadlay sida daadajinta awoodda dowladda dhexe ay gacan uga gaysan karto daadajinta adeega caafimaadka ee dalka mustaqbalka dhaw iyada oo loo fiirinaayo awoodda dowlad goboleedyada dalka ka jira.
Ugu dambayntii hagaajinta tayada shaqaalaha, iyo kor u qaadista iskaashiga dawlada iyo ganacsatada si loo bixiyo loona maalgaliyo adeegyada caafimaad ayaa ahaa talooyinkii ugu muhiimsanaa ee lasoo jeediyay si faaiido dhab ah loogu badalo fursadaha ka jira caafimaadka dalka.